२०८५ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश ‘प्याक’ |
२०८५ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश ‘प्याक’
काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा जोशीसहित न्यायाधीशद्वय मिश्र र जबराको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। मिश्र र जबराले २०७१ जेठ १३ गतेदेखि न्यायाधीशमा पदवहाली गर्नुभएको हो। जोशी, मिश्र र जबरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएका बेला नियुक्त हुनुभएको थियो।
जोशी फेरि प्रधानन्यायाधीशको दौडमा
संवैधानिक परिषद्को बैठक आज ,को बन्ला प्रधानन्यायाधिश ?
अबको प्रधानन्यायाधीश को?
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्काे बैठक
मिश्रको नाममा संसदीय सुनुवाइ हुँदै
आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै, नाम सिफारिस होला ?